'Yaaddoon Ummata Itoophiyaa Gungumsuu Irraa Dallansuu Ummataatti Hin Jijjiiramne’
Roobii, Guraandhalaa 10, 2016 Local time: 07:36
Paartiin mormitu Itoophiyaa rakkoo fi fala siyaasaa Itoophiyaa irratti mari’achuuf kalee Finfineetti kora yaamte.
Akka jecha itti gaafatamaa paartii Qindoominaa,Tokkummaa fi Demokiraasii Itoophiyaa Dr.Nagaasoo Gidaadaatti yaaddoon ummata Itoophiyaa gungumsuu irra jirti malee dallansuu ummataa taatee alatti hin baane.
Hawaasii akka jecha Dr.Nagaasootti falaa fi waan hedudu paartilee siyaasaa irraa eegachuulleen waan mumullataa keessaa tokko.
Tana maleellee paartiin biyya bulchitu Bulchiinsii mootummaa gugurdaa sadeen;ka Seera Baasu,Ka Seera Tohatuu fi Seera Hujiitti jijjiiru woma fedhii ufiitiin guutachuutti jira.
Kun ammoo akka jecha Nagaasootti mirga ummataa gadi qabu taati.Itoophiyaatti akka paartileen mormituullee hin jiraanne dhowwuutti jira.Kaan hidhaan,ijjeechaa fi waan gara garaatiin dorsisu.